ईटहरीमा आफ्नै आमालाई खु’कुरी प्र-हार गरेपछि… यस्ता छोरालाई के भन्नुहुन्छ? – PathivaraOnline
Home > अपराध > ईटहरीमा आफ्नै आमालाई खु’कुरी प्र-हार गरेपछि… यस्ता छोरालाई के भन्नुहुन्छ?
admin January 23, 2020 अपराध, समाचार, समाज	0
सुनसरी । यतिबेला नेपालमा दिनानुदिन घरेलुहिं’सा बढ्दै गएकाे छ । सुनसरी जिल्लाको ईटहरी–२ हवाइ चोकमा एक युवकले आफ्नै आमालाई खु’कुरी प्र’हार गरी घाइते तुल्याएका छन् । १८ वर्षीय पारस कार्कीले बुधबार राति साढे १० बजे घरमै आमालाई खु’कुरी प्र’हार गरेका हुन् । खु’कुरी प्रहारबाट उनका आमा ३६ वर्षीया कविता कार्की घाइते भएकी छन् । सामान्य घरायसी विवादमा पारसले आमालाई खु’कुरी प्र’हार गरेको बताइएको छ ।
खुकुरी प्रहारबाट कविताको शरीरको विभिन्न भागमा चो’ट लागेको छ । उनको नोबेल अस्पताल बिराटनगरमा उपचार भइरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरीले जनाएको छ । खुकुरी प्रहार गर्ने पारसलाई खुकुरीसहित पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
श्रीमती सुत्केरी हुदाँ अब श्रीमान पनि सँगै बस्नुपर्ने
काठमाडौं । शिशु कसरी जन्माउने ? प्राकृतिक (नर्मल)अथवा शल्यक्रिया (अप्रेशन) मार्फत । यी विधि गर्भवतीको रोजाइले भन्दा श्रीमान्, घरपरिवार र स्वास्थ्यकर्मीको निर्णयले नेपालमा प्राथमिकता पाइरहेको छ । स्वास्थ्य संस्था अथवा घरमा सुत्केरी व्यथाले छट्पटाइरहेकी श्रीमतीको दुःखको साक्षी प्रायः श्रीमान् हुँदैनन् । उनीको साथमा आमा, सासु, दिदीबहिनी अन्य महिला नै हुने गर्दछन् । सुत्केरी हुने अवस्थामा श्रीमान् अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान विकसित देशमा रहेको बताइन्छ ।
कतिपय देशमा श्रीमानको अनुमतिविना चिकित्सकले गर्भवती जाँचसमेत गर्दैनन् । श्रीमानलाई साथमा राखेर सेवा दिन्छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित जुम्ला अस्पतालले गर्भवतीले आफूले चाहेको विधिमा सुत्केरी हुन पाउने र विशेषगरी सुत्केरी हुन लागेको अवस्थामा श्रीमान् अथवा घरपरिवार अनिवार्य साथमा रहनुपर्ने अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी थाल्दै छ ।
प्रतिष्ठानकी नर्सिङ डीन सरस्वती गौतम भट्टराईले प्राकृतिकरूपमा सहज सुत्केरी गराउन जुम्ला अस्पतालले छुट्टै बर्थिङ सेन्टर (सुत्केरी केन्द्र) स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिइन् । ‘चिकित्सकले जटिल भनेर सिफारिश गरेका बाहेक’ अन्य गर्भवतीलाई प्राकृतिकरूपमा सुत्केरी गराउन मिडवाइफले सेवा दिने उनले जानकारी दिए । अस्पतालमा पछिल्लो समय शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउन निरुत्साहित हुँदै आएको छ ।
“नर्मल विधिबाट डेलिभरी हुन पाउनु महिलाको अधिकार हो, शल्यक्रिया त जटिल अवस्थामा दोस्रो विकल्प हो । पहिलो विकल्प हुँदाहुँदै दोस्रोको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो ध्येय हो”, उनले भनिन्, “सुत्केरी हुने अवस्थामा श्रीमान् अथवा घरपरिवार नजिक हुँदा आत्मबल उच्च हुन्छ । शिशु निकाल्न शक्ति उत्पन्न हुन्छ । यसैले सुत्केरी हुँदा नजिक परिवारको अनिवार्य खोजी गरिएको हो ।”
सुत्केरी गराउन, आमा र नवजात शिशुको स्याहार तथा परिवार नियोजनका सेवा प्रदान गर्न मिडवाइफलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । पछिल्लो समय प्राकृतिकभन्दा शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउने सङ्ख्यामा वृद्धि भइराखेको जनाइएको छ ।
हाल चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ९न्याम्स०बाट पहिलो समूहमा नौ मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सो विषयमा अध्यापन शुरुआत गराएको छ । यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए)ले ती दुई निकायलाई प्राविधिक सहयोग गरेको जनाइएको छ ।
अगामी वर्षदेखि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन र वीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले ती विषयमा अध्यापन गराउने तयारी गर्दैछन् ।
हाल गत वर्षका छ र यस वर्षका १० जनाले सो विषय अध्ययन गरिराखेका छन् । “ज्ञान, सीप र व्यवहार तीनै पक्षबाट विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट बनाउन प्रतिष्ठानले उच्च ध्यान दिएको छ । हाम्रा जनशक्ति विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छन् । पाठ्यक्रम स्थानीय होइन, अन्तरराष्ट्रियस्तरको हो”, प्रतिष्ठानकी नर्सिङ डीन भट्टराईले भनिन् ।
बुधबार सम्पन्न तीनदिने विशेषज्ञ बैठकले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले कार्यान्वयनमा ल्याएको मिडवाइफ पाठ्यक्रम निर्देशिका र मिडवाइफको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घले निर्धारण गरेका ३१८ बुँदाका आधारमा विधि तयार पारेको प्रतिष्ठानका नर्सिङ प्रमुख निर्मलाकुमारी पहाडीले जानकारी दिइन् । अब सैद्धान्तिक ज्ञानबाट प्राप्त अङ्क र मापन विधिका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुनेछ ।
बाख्राको मासु खाँदा एकै गाउको १५ जना भयो यस्तो हालत
यी १४ बर्षिय किशोरले आफ्नै दिदीलाई गर्भवती बनाए, दिदीले जन्माइन् शौचालयमा छोरी